Aqoon kororsi ha la siiyo hoowl wadeennada caafimaadka ee gudniinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle Photo/Jerome Delay
Aqoon kororsi ha la siiyo hoowl wadeennada caafimaadka ee gudniinka
La daabacay fredag 22 februari 2013 kl 13.30
Hoowl-wadeennada goobaha dar-yeelka caafimaad ayaa baahi u qabi kara aqoon-kororsi la xiriira sidii ey u siin lahaayeen dar-yeelka ugu wanaagsan haweenka lagu sameeyey falalka gudniinka fircooniga, sida ay sheegtay Git Franzén Ekström oo iminka baaritaan ugu howlan dhabbooyinka hoowl-wadeennada degmooyinka iyo gobolladu u maareeyaan howlaha la xiriira la kulanka haweenka ey la soo gudboonaadeen gudniinka fircooniga, sida ay noo sheegtay mar aannu khadka telefoonka kula xiriirney:
- Dadoowgii aan la sheekeeystay ayaa ii sheegay in gudniinku yahey xaalad adag ee aan laga hadal. Wey adag tahay in laga wada xaajoodo arrimmaha galmada la xiriira. Sidaa si la mid ah way adag tahay in laga hadlo gudniinka fircooniga, waayo qofna ma doonayo inuu dhaqanka Iswiidhen khasab ku geliyo ama ka sara mariyo mid kale.
Inay jirto baahi ey hoowl-wadeennada caafimaadku middaa u qabaan ayay aaminsan tahay Lena Brissman, isku-duwaha cusbitalka gobolka Kalmar. Xitaa hadii ey jiraan dhabbooyin loo dejiyey howlahaa iyo sidii loo qaabili lahaa haweenka gudniinka fircooniga lagu faley, ayey haddana hoowl-wadeennadu dareemeyaan iney u baahan yihiin aqoon-kororsi intaa dhaafsiisan:
- Maxaa dhici kara haddii gabadhu su'aal i waydiiso. Oo ay tahay mid aanan ka jawaabi karin. Way wanaagsanaan lahayd marka in aqoon kororsi la helo, sida matalan xubnaha bani'aadamku u sameeysan yhiin, sida ay sheegtay Lena Brissman - isku duwaha cusbitalka gobolka Kalmar.
Git Franzén Ekström, ayaa sheegtay in ajaaniibta dalka timaadaa la kulmaann hoowl-wadeenno kala duwan oo leh aqoon kala duwan. Isla-markaana aaminsan tahay in isku-dhafka aqoonta hoowl-wadeennada wax badan ka badali lahayd habka dar-yeelka caafimaad ee haweenka ey la soo gudboonaadeen ama lagu sameeyey gudniinka fircooniga:
- Kalkaaliyeyaasha caafimaad, umulusooyinka iyo hoowl-wadeennada goobaha dar-yeelka hooyooyinka uurka leh iyo ilmaha sabiga ah waxey leeyihiin aqoon dhanka caafimaadka la xiriirta. Hoowl-wadeennada hayadda socdaalku waxey iyaguna leeyihiin aqoon la xiriirta waddammada ey ka soo jeedaan haweenka/hablaha lagu falay gudniinka fircooniga. Marka waxaan jeclaan lahaa in labadaa aqoon la isku dhafo, sidii sawir buuxa looga heli lahaa falalka dhaca, sida ey u dhacaan iyo meesha ey ka dhacaan, isla-markaana loogu war-gelin lahaa xuquuqda ey leeyihiin iyo waajibaadka saaran hablaha ey la soo gudboonaadeen gudniinka fircoonigu kolka ey dalkan yimaadaan, sida ay sheegtay Git Franzén Ekström.
Gobolka Kalmar oo ay ka howl-gasho Git Franzén Ekström ayaa la saadaalineyaa iney yimaadaan tiro qooysas soomaaliyeed, middaasina sabab u noqotay in baare Ekström ku tallaabsato sidii ay ugu guur-geli lahayd habka qabilaadda dar-yeelka caafimaad iyo sidii loo hagaajin lahaa qaabilaadda haweenka lagu soo falay gudniinka fircooniga.
- Waxaa maantaba muuqata iney dalka soo geleyaan qooysas badan ee soomaaliyeed. Waxaa carrigaa ka jira dhaqanka gudniinka fircooniga ugu culus oo la jaro qeybo badan ee ka mid ah xubinta galmada haweenka. Waa marxalad aad ugu adag hablaha. Hadday noqon lahayd oogiyan iyo maskixiyanba, sida ay sheegtay.
Cilmi-baaristan oo socon doonta muddo bilo ah ayaa goolka dhabta ah ee laga leeyahay uu yahay sida ay noo sheegtay Git Franzén Ekström inuu yahay:
- Ugu horreeyn in eegid lagu sameeyo nidaamka iminka la raacaa sida uu yahay. Iney jiraan hab isku mid ah oo ey u hoowl-galaan, inay wada-shaqeeyn ka dhexeeysa maamullada hoowlahaa ee gobolka iyo degmooyinka. In la baahiyo culuuntaasi. Iyo in la soo saaro buug yar oo ey ku cad yihiin aqoonta howshaa oo dabadeed loo gudbin karo dhammaan hoowl-wadeennada caafimaadka iskuullada ee gobolka oo dhan, sida ay sheegtay Git Franzén Ekström.